बलिउड Archives - Page3of 10 - www.kchhakhabar.com
सलमान खानलाई अर्की गर्लफ्रेन्डबाट पनि धोका !
सलमान खानको लभ–लाइफको ह्याप्पी इन्डिङ हुँदैन । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले यसै भन्छ । कुनैबेला उनी ऐश्वर्य रायसँग अफेयरमा थिए । पछि, ऐश्वर्यले उनलाई लत्याए । त्यसअघिका गर्लफ्रेन्ड शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अलीले पनि सलमानलाई एक्लो बनाए । ऐश्वर्यपछि सलमान क्याटरिना कैफसँग जोडिए । उनीहरुको प्रेम–सम्बन्ध पनि दुई चिरा पर्‍यो । आखिरमा सलमान रोमानियन केटी यूलिया वन्तूरसँग रोमान्स गर्न थाले । तर, उ...
के साम्राज्ञीको ट्याटु सक्कली हाे ?
केहि दिन अगाडि नायक आर्यन सिग्देल र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक तस्बिरमा आर्यनको घाटीमा गितारको ट्याटु देखिएको थियो । आर्यनले उक्त ट्याटु चलचित्र ‘कायरा’का लागि बनाएका थिए । आर्यनको सो ट्याटु सार्वजनिक भएसँगै उनी चलचित्रमा सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको एक कलाकर्मीको भूमिकामा रहेको वुझन् सकिन्थ्यो । त्यसको केहि दिनमै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी श...
‘म छातीमाथि ढुङ्गा राखेरै भए पनि बिदाईको हात हल्लाउने थिएँ’…..
मदन एकालापमा हराइरहेको थियो । उसले सोच्यो, त्यस अपरिचित मानिसले जुनेलीको चरित्रका बारेमा फोनमा भनेका कुरामा केही न केही सत्यता अवश्य रहेछ । जुनेलीको भनाइले त्यसको पुष्टि ग¥यो । जुनेलीसित कुरा गरेकोे रात अबेरसम्म मदनलाई निद्रा परेन । रात ढल्किनै लाग्दा उसले गजवको सपना देख्यो । सपनामा जुनेलीको विवाह एउटा धनी मानिससित भएको थियो । ऊ लोग्नेसित कारको अघिल्लो सिटमा बसेर मस्कँदै हिंडिरहेकी थिई । उ...
अभिनेत्रीले भनिन्-‘फिल्मको अन्त्यमा मैलें आफुलाई योनीमा अवशोषित पाएँ’
अहिले बलिउडमा हलचल पैदा गरेको छ, फिल्म पद्यावतले । संजय लिला भन्सालीको यो फिल्म अनेक लफडा झेल्दै अघि बढिरहेको छ । फिल्मले चार दिनमा सय करोड (भारु) कमाई गरेको छ । जबकी भारतकै करिब चार वटा प्रान्तमा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ । भन्सालीको फिल्मले यस्तो कम्पन ल्याएको छ, जसले बलिउड हल्लाइरहेको छ । बलिउडमा पद्यावतलाई लिएर तर्क/विर्तक पनि चलिरहेको छ । अधिकांश बलिउडकर्मीले भन्सालीले ‘अकल्पनिय काम ग...
मृत्युको मुखबाट फर्किएका थिए अमिताभ
मुम्बई । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको स्वस्थ्यको कुरा आउने बित्तिकै हिन्दी चलचित्र ‘कुली’ को प्रसंग आइहाल्छ । सुटिङको क्रममा भएको दुर्घटनामा उनी गम्भिर घाइते भएका थिए । धेरैले उनलाई उक्त घटनामा मृत्युको मुखबाट फर्किएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो जीबनमा घटेका दुर्घटनासंग सम्बन्धित केही घटनावारे वेलीविस्तार लाए । अभिनेता बच्चनका अनुसार दिवालीको अवस...
किन गरियाे जुत्ता प्रहार तमन्नामाथि …..
मुम्बई । बलिउड नायिका तमन्ना भाटियालाई एक युवकले जुत्ता प्रहार गरेका छन् । दक्षिण भारतकी लोकप्रिय नायिका तमन्नालाई हैदरावादको हिमायतनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा ३१ वषिर्य करिमुल्लाह नाम गरेका युवाले जुत्ता प्रहार गरेका हुन् । ज्वेलरी सप उद्घाटन गर्न गएको बेला तमन्नमाथि जुत्ता प्रहार भएको थियो । जुत्ता प्रहार गर्ने करिमुल्लाहलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरेको थियो । तमन्नाले पछिल्ल...
दीपिका भन्छिन- कट्रिनालाई मेरो बिहेमा किनबोलाउँनु
फिल्म ‘पद्यावत’का कारण यतिबेला दीपिका पादुकोण चर्चामा छिन् । तर, त्यो चर्चालाई ओझेल पार्ने अर्को प्रसंग जोडिएको छ । त्यो हो, कट्रिनासँगको उनको दुश्मनी । हालै दीपिकाले आफ्नो बिहेमा कट्रिनालाई नबोलाउने सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि यतिबेला उनीहरुवीचको दुश्मनी सतहमा देखिएको छ । थाहा भएकै कुरा हो, दीपिका र रणवीर सिंह प्रेम सम्बन्धमा छन् । उनीहरुले यसै बर्ष बिवाह गर्ने हल्लीखल्ली पनि छ । यसै मेसोमा एक अन...
यौनजन्य दृश्यले भरिएको ‘हेट स्टोरी ४’ को ट्रेलर रिलिज (भिडियो सहित)
काठमाडौं। अत्यन्तै बोल्ड मानिएको फिल्म हेट स्टोरी सिरिजको चौथो फिल्म ‘हेट स्टोरी ४’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । निर्देशक विशाल पाण्डेको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा गुलशन गेवर, उर्वशी रौतेला, करण वाही, विवान भटेना र इहाना ढिल्लनको मुख्य भूमिका छ । ट्रेलरमा देखाइएअनुसार फिल्मको कथा दुई दाजुभाइकोद्वन्द्वमा आधारित छ जो एउटै युवतीको प्रेममा पागल छन् । ट्रेलर हेर्नुहोस् – https://www.youtu...
रणवीरसँगको बिहेको खबर गलत भएकाे खुलासा दीपिका
बलिउड नायक रणबीर सिंह र नायिका दीपिका पादुकोणको सम्बन्धको चर्चाले भारतका धेरै मिडिया रंगिएका छन् । दीपिका–रणबीरको बोलचाल बन्द भएको खबरदेखि सुटुक्क बिहे गरेसम्मको प्रसंगले स्थान पाउने गरेको छ । केहि दिन अघि पनि केही मिडियाले दीपिका र रणबीरले श्रीलंकामा सुटुक्क बिहे गरेको खबर छापेका थिए । मुम्बइमा आयोजित एक कार्यक्रममा दीपिकाले सबै खबर गलत भएको बताइन् । ‘विवाहको के कुरा हाम्रो इन्गेजमेन्ट भएको खब...
बलिउडमा अर्काे एक पोर्न स्टारको इन्ट्री, पोष्टरले नै मच्चायो तहल्का
मुम्बई । बलिउड अभिनयमा अर्काे एक पार्ने स्टार पनि थपिने भएकी छन् । चर्चित निर्देशक राम गोपाल वर्माको नयाँ चलचित्रबाट अर्काे पोर्न स्टारले अभिनयमा डेब्यु गर्दैछिन् ।फरक धारको चलचित्र निर्माणमा माहिर बर्माले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’का पोेष्टर सार्वजनिक गरिदिएका छन् । पोष्टर सार्वजनिक लगतै शोसल मिडियामा तहल्का मच्चिएको छ । चलचित्रको यो पहिलो पोष्टर हो । यस पोष्टरमा लिड अभिनेत्री निकै...